अब विपद्का सबै सूचना एकै ठाउँबाट | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
साउन ८, २०७६ बुधबार ६:४५:३५ | रासस
काठमाण्डाै – तपाईँले कुनै पनि बेला हुने विपद्का घटनाको जानकारी पाउन सकस झेल्दै आउनुभएको छ ? अथवा भएका घटनामा जानकारी पाउन सक्नु भएको छैन ? या वर्तमानमा कहाँ के भइरहेको छ भनेर जानकारी लिन मुस्किल परिरहेको पो छ की !
त्यतिमात्रै होइन, भएका घटनाबारे अहिले के भैरहेको छ, राहत पाएको छ कि छैन, कुन निकायले राहत उपलब्ध गराउँदै छ, कुनै ठाउँमा राहत दोहोरिएको पो छ की ! यस्तैयस्तै समस्या छन् भने अब त्यसबाट तपाईँ मुक्त हुँदै हुनुहुन्छ । यसका लागि तपाइँले एउटै वेब साइट खोले पुग्छ । गृह मन्त्रालयले अहिले परीक्षण गरिरहेको ‘एकीकृत सूचना प्रणाली’ अन्तर्गतको www.bipad.gov.np लग इन गरे पुग्छ । यसबाट सूचना मात्रै आउने नभई आधिकारिक निकायबाट प्रतिकार्यमा तत्कालै जुट्नसमेत मद्दत गर्नेछ ।
“विपद्का सूचनाहरू एकै ठाउँबाट सबैले जानकारी पाउन सकुन्, हरेक घटनाको व्यवस्थापन र राहत वितरण कार्यसमेत नदोहोरिने गरी काम प्रभावकारी होस् भन्ने उद्देश्यले उक्त सूचना प्रणालीको विकास गरिएको हो, यसबाट अहिले तीन तहको सरकारबीच समन्वयमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।” गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख वेदनिधि खनालले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार स्रोत, साधन, जनशक्ति, समय र बुद्धीको दुरूपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले एकीकृत सूचना प्रणालीको हो ।
गएको असार अन्तिम साताको अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो र डुबानले ठूलो जनधनको क्षति भयो । यसको विवरण प्राप्त गर्न सञ्चारकर्मीलाई होस् या विपद् व्यवस्थापनमा लागेका सरकारी अधिकारीलाई धौधौ पर्‍यो । कतिपय सरकारी कार्यालयका विवरणसमेत फरक फरक आए । अहिलेसम्म पनि क्षतिको यकिन विवरण आउन सकेको छैन । यसरी फरकफरक विवरण नआओस् र समयमै यकिन विवरण आओस् भन्ने उद्देश्यले गृह मन्त्रालयले उक्त वेब साइट सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
घटनाहरूको विवरण तत्कालै स्थानीय क्षेत्रबाटै हाल्न सक्ने र राहत वितरण भए नभएको समेत जानकारी दिन सकिन्छ । “कहाँ कति सामान छ, के के आवश्यक छ भनेर वेबबाटै जानकारी दिन र लिन सकिने गरी उक्त सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थापन गरिएको छ, जसले विपद् व्यवस्थापनसँगै क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास छ”, खनालले थप्नुभयो । उहाँले सबै निकायसँगको समन्वय गर्ने कडी नै वेब हुने बताउनुभयो ।
यसको सञ्चालनका लागि निर्देशक समितिको नेतृत्व गृह मन्त्रालयका सहसचिव इन्दु घिमिरेले गर्नुभएको छ भने प्राविधिक समितिको नेतृत्व केन्द्रका प्रमुख खनालले गर्नुभएको छ । अब आउने ठूलो विपद्मा साइटको प्रयोग गर्ने योजना रहेको र छिटै प्रदेश र स्थानीय तहमा छलफल चलाउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्ले समेत यसलाई पारित गरी अहिले कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको हो । यसपालीको विपद्मा प्रचारप्रसार नभएको र स्थानीय तहसम्म नपुगेकाले प्रयोग गर्न भने नसकिएको जनाइएको छ ।
मंगलबार अपराह्नको विवरणअनुसार गएको एक महिनामा नेपालमा ५०६ वटा विपद्का घटना भएका छन् । जसमा १०० जनाको ज्यान गएको छ । पहिरोका १७७, बाढीका ११६, आगलागीका १०६, चट्याङका ४१ वटा घटना भएको अभिलेख छ । यही अभिलेखमा सन् २०११ देखि अहिलेसम्म १८ हजार ४२० घटनामा १० हजार ६३० जनाको ज्यान गएको खतिवडाले साइटको विवरणबारे बताउनुभयो । “यसलाई कसरी सजिलो तरिकाबाट चलाउने भन्नेमा हामी लागेका छौँ, साइटको काम भने सबै सम्पन्न भैसक्यो”, खतिवडाले भन्नुभयो ।
सिन्धुपाल्चोक बस दुर्घटनाः ज्यान गुमाएका १४ मध्ये ५ को सनाखत
जावलाखेल युथ क्लबलाई प्रभु बैंकको प्रायोजन
पोखरा प्रिमियर लिगको पहिलो खेलमा ज्ञानेन्द्र र शरदको टिम खेल्दै
राष्ट्र बैंकले तोकेको रियाल, रिंगिट, दिर्हाम लगायतका विदेशी ...